Waa maxay sababta aan qoray buug — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
DURRELL • August 19, 2013 at 9:06 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan ahay taageere Diintiinii oo waa mid aad u xiiso aad music. Waxaad tahay waxyi oo caynkaas ah ii i ahay a 17 Gabar sano jir ah hooba on dab, waayo, Ilaah. Your music waa mid wax tar leh ii, oo i sidoo kale ku heshiin buugaagta ka dhigtay i sidoo koraan. Aad u xiiso idinkaa reading.
Humdaddy • August 19, 2013 at 9:06 waxaan ahay • Reply
Hore u akhriyin cutubkii ugu horeeyay, Ma sugi karo inaan akhriyo intiisa kale. Your music ayaa had iyo jeer ahaa dhiirigelin ah aniga iyo waxaan aaminsanahay buugga la mid ah waxay noqon doonaan!